INsalela Vyahirev: Biography, umsebenzi, umndeni
Ngo-August 1934 edolobhaneni Bolshaya Chernigovka Kuibyshev esifundeni ozalwa umphathi futhi sikahulumeni, ikusasa "negesi King" iNsalela Vyahirev. omdala emndenini uthisha sika kusukela zisencane ayevelele ukoma hhayi kuphela ulwazi, kodwa akazange ugweme zabasebenzi elula ngokomzimba: njengoba abafundi abambalwa esikoleni esiphakeme, athula izitsha phezu iVolga, ngaleyo ndlela imali yabo ukusiza abazali. Ngo-1956 wathola iziqu Kuibyshev iNsalela Vyahirev zezimboni esikoleni esiphakeme, ngoba ikusasa onjiniyela izimayini, abafundi okukhethekile esanda abasafufusa esifundeni, ukukhokha i yesibonelelo anda. Ngakho angesabi, kodwa kuyiqiniso kuphela wakhethwa umsebenzi, ikakhulukazi lapho kuyinto ukuthuthukiswa uwoyela negesi Amasimu. Icala iNsalela Vyahirev ukuphila kwakhe konke.
Esokuqala kweminyaka nanhlanu wayesebenza njengoba iziqu Industrial Corporation "Kuybyshevneft", lapho amakhono lakhe ibingamashumi wokuqala owabikwa ahlele ukukhiqizwa futhi ulethe ndawonye abantu ukuba yimbangela ejwayelekile. Yingakho ngo-1971 iNsalela Vyahirev kuthatha ekuqaleni konke ukuphathwa "Orenburggazdobycha". Futhi ngemva kweminyaka emibili umhlangano kubalulekile.
Vyahirev iNsalela Ivanovich wahlangana futhi baba abangane ngalo kanye nomqondisi entsha engumakhelwane gazopererabatyvaeyuschego isitshalo - Viktor Chernomyrdin. Yiqiniso, wadlala indima yokuhola Eminyakeni eyalandela ngumuntu ukukhula abukhali umsebenzi gxuma Vyahirev. Nakuba ngisho ke, e ngeminyaka yoma, akekho noyedwa obengasho ukuthi ukukhuthazwa uyephuza.
Ngo-1976 Vyahirev iNsalela Ivanovich kakade Umqondisi we "Orenburggazdobycha", futhi ngo-1978 waba unjiniyela omkhulu wokuba nomshado olukhudlwana - VPO "Orenburggazprom". Ngemva kweminyaka emihlanu, ngesikhathi esifanayo ukuze wenze ukushintshela ebuholini "Tyumengazproma" lungena ngaphansi ngqo igunya uNgqongqoshe igesi umkhakha yezwe, uViktor Chernomyrdin, ekubeni umsizi wakhe.
INsalela Vyahirev, ogama Umlando womuntu ophilako isikhathi eside uzobe ehambisana ne-entsha brainchild yakhe - ukukhathalela "Gazprom", ngokuyinhloko ngenxa kobungane nobudlelwane kuphela, kungaletha imibono yabo ekuphileni. Rao "Gapzprom" lapho Vyahirev - Okokuqala Isekela Usihlalo Webhodi, ekuqaleni wadala ngesisekelo Ministry of the umkhakha igesi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi wanikwa le bamasheya.
Rao "Gazprom" hhayi kuphela
Ngo-1992, lapho Viktor Chernomyrdin waya umsebenzi kahulumeni, Vyahirev iNsalela Ivanovich, ogama biography iye uvalwe exhumene "Gazprom", waba usihlalo we ukukhathazeka. Ngaphambi kuka-1996 wayebuye inhloko Rao eBhodini Labaqondisi.
Njengoba nineties bokuthunyelwe uyanezela, lena nomsebenzi woMkhandlu ngenqubomgomo ezimbonini Government of the Russian Federation, futhi kukaSihlallo eBhodini Labaqondisi kanye Trustees "Imperial" Bank iBhodi 1995 - eBhodini Labaqondisi "Russian Public Ithelevishini" futhi "Indlu yethu - Russia "kusukela ngo-1996 - likaMengameli we Council labaqondisi ukukhathazeka" inkampani laseSiberia uwoyela ".
Ngo-1998 kuya ku-1999, iNsalela Vyakhirev wayeyinhloko we Supervisory IBhodi ICB Russia, kuze kube ngomzuzu lapho ibhange elahlekile ilayisensi yayo. Kodwa abacebe, ngobukhulu umkhankaso Russian - "Gasprom" kwaba sonke isikhathi ntanta futhi ngajabulela usihlalo Vyahirev kunethonya elikhulu kuleli zwe, angenzi njengabaningi irejista yesibili ukheshi zonke izinhlobo ezihluzekile ngesikhathi sezinhlekelele. Kufana 'Gazprom "kungenzeka ngesikhathi ukusiza ekugcinweni Ruble noma angabuyisela impesheni ngeshwa. Ngokwemvelo, lokhu kusho ukukhathazeka nabaholi bayo uthole ukwesekwa iziphathimandla zonke emitameni.
Yelulela ngo-1992 uNgqongqoshe B. Lopuchin wangaphambili fuel namandla isikhonzi, uViktor Chernomyrdin futhi Vyahirev yabhuntsha kabusha imboni (futhi reformism, olwenziwa Egorom Gaydarom ngesikhathi - kwayona nesifenqo). Ipulani "bezinguquko abasha" babemi "Gazprom" - hulk ngoba Vyahirev ukukhathazeka - kuphela okuphiqikayo. Ngaphezu kwalokho, ngisho wakwazi ukwakha ekhethekile intela njengoba sinjalo Isikhwama, okuyinto "Gazprom" ukuze ninciphise ingxenye ukuqhutshwa, ngaleyo ndlela esindisa izinkulungwane zezigidi zamaRandi ngonyaka. Privatisation kwenzeka ngaphansi kwezimo ezikhethekile.
uhulumeni Chernomyrdin sika ngo-1994 wavumela ukukhathalela Mvume Trust ukuthola ubunikazi cishe zonke amasheya ephethwe nguhulumeni, okungukuthi, amaphesenti amathathu nanhlanu, izwe lakubo ezinhlanu kuphela. Ngaphansi kwemibandela ye-ithemba "Gazprom" Kungenzeka angazihlenga ukubaluleka par of lamasheya ngo-1996, unyaka, bese babekuthengisa futhi afeze ukuqhutshwa ukutshala ezinhlelweni eziningi kulo lonke ayitholwa igesi. Kodwa "bezinguquko abasha" Chubais futhi Nemtsov nabo babekhona isexwayiso, ngoba ngo-1995 imigomo ithemba abangu elibuyekeziwe kabi ukuba "Gazprom", njengoba ngo-1997 futhi benza isivumelwano ne Vyakhirev inqanyuliwe.
Uye waba yini
It REM Vyahirev, isimo iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, wenze "Gazprom" inkampani acebe kakhulu ezweni, ukusekela umnotho walo. Ukudala izinkampani ngokuhlanganyela (Wintershall, Wingas), iqembu kwaholela Russia okokuqala emlandweni walo ekupheleni umthengi European.
Ngesikhathi esifanayo (futhi mathupha Vyakhirev efanayo) ukudala amaphrojekthi kakhulu emikhulu ukuze kwakhiwe imizila igesi ezokuthutha, kuhlanganise phansi olwandle ( "Blue Stream"). Izibopho ukuthi umkhakha igesi manje uye wamisa isikhathi esiningi ngenkathi ushayela ukukhathazeka Vyahirev.
Nokho, izinto azihambanga kahle wake ukugxekwa zomsebenzi wayo kwaba izikhathi prohibitively ezinzima, ikakhulukazi kusukela "izingane" (enamasheya esizweni esincane awukwazi ngqo iqhaza ekuphathweni inkampani, njengoba singasebenzi inombolo ngokwanele lamasheya). Ngokuvamile, isinyathelo Vyahirev akafani nalabo abahlubuka wangena ibhizinisi US izimali kanye namafemu.
Ngokwesibonelo, kumayelana owayenguNgqongqoshe Wezezimali Boris Fyodorov (ingasaphathwa into yayo ukwenzani izimali Russia lapho omubi kanjani kwacaca ukuthi, kodwa zisekelwe UFG futhi Hermitage - Bill Browder led), eye njalo okuphikisana kobuholi "Gazprom". Vyahirev iNsalela Ivanovich, imbangela kabani sokufa - ukwehluleka oyingozi inhliziyo, ukugxeka ngokuqinisekile zalamukela.
Unyaka ka-1998 kwaba eyesibili ithonya "Gazprom" kunqubomgomo ukuphathwa yezwe turning: kwakukhona ukwesula Viktor Chernomyrdin, kodwa ngoba ngonyaka ozayo kukhona umbuzo Zuma we REMA Vyahireva. Well, okungenani hhayi alahlwe Goldovsky futhi sheremet. Nge Ukuhamba Yeltsin futhi Vyahirev wasuka ukuba ahambe, kusukela saphela kube "onamandla onke": ngisho deal kwadingeka impahla ukuba esihlelwe neBhodi yabaNqophisi, zikhanseliwe izimo eziningi abashe izinkontileka. Vyahirev uthanda "unesizungu" futhi ngo-2002, washiya brainchild yakhe ekugcineni, ngisho likaMengameli we-Russian negesi Society.
Akungabazeki ukuthi, kokushiya "Gazprom" iNsalela Ivanovich ungase uthole kuphi futhi yonke indawo kungaba endaweni. He is umholi asebenzayo futhi okungenani usosayensi eziyibonayo, umlobi engaphezu kuka ayisithupha amaphepha isayensi - bona zonke ezihlobene ekuthuthukiseni igesi Amasimu nezindlela ukusetshenziswa igesi kokubili kwezolimo futhi umkhakha. Abaningi abazinikele emnothweni kanye emvelweni igesi, ukwakheka kwalo. Ngo Vyahirev nantathu esishunyekiwe izitifiketi copyright icebo. Kodwa iNsalela Ivanovich sengathi ziyoncibilika emoyeni, kokuba umhlalaphansi. Ayikho izingxoxo iminyaka eyishumi nanye. Ibhizinisi akukho.
"Gazprom" Vyahirev emva ukwesula akakuthandanga ukuvakashela, kodwa ukuhlangana nabangani ngesikhathi izimayini ngokwabo - lena into emnandi. Owayeyinhloko ye Gazprom sika azungeza enyakatho cishe ngokuphelele, lapho ahlangana khona kulo kuka bamukelekile. Ukuze Miller, ngezinye izikhathi wayeya ehhovisi - nezicelo. Ngokwesibonelo, mzukulu ukuba uthole umsebenzi. Yiqiniso, akwenzekanga. Musa izomhlangabeza. Nokho, Izingane nabazukulu, zihleleke kahle, kubo ayisakwazi ukhathazeke. INsalela Vyahirev, ogama umndeni lihlobene umkhakha igesi cishe ngokuphelele ngaphandle kokukhathazeka bahluleka. kuba umuntu ngokwakhe ngokungajwayelekile enesizotha, njengoba induna oyinhloko "Gazprom", kanye nonkosikazi wakhe nezingane babehlala encane efulethini amabili okulala ngenhla esitolo "Izinhlanzi" wahlala khona iminyaka eminingi. Kodwa emsebenzini, ungahamba ngokushesha.
Izingane Vyahirev iNsalela Ivanovich esisizuze ngefa hhayi bathi esikhathini esiningi. INdodana futhi izimpilo edolobhaneni suburban ka Gazprom ku Kaluzhke nendodakazi owakhile indlu phambi uyise - esinezitezi ezimbili a ngokhuni, futhi incane kakhulu, eceleni lapho kunqoba wonke enamandla laseSiberia sonwele samoruchno yaletha esuka saseTomsk, futhi itafula ngokhuni ngaphansi. Ingabe ezithengiswayo sifana nabanye izigodlo gazpromovtsev, hhayi kubo kuphela. Lapha njalo siphazamise "Gazprom" futhi ngenxa yalokho wazonda ezithakazelisayo Bungalow eyakhelwe phambi Pasternak e Peredelkino Vyakhirev Chubais okuningi, futhi Zhavoronki ke - izigodlo yangempela ngaphambili owayengenalusizo ephethwe izinkulisa eMoscow. "Iyingozi kwakungekho muntu eRussia - Rumour Vyahirev -. Futhi akunakwenzeka kuyoba."
Yiqiniso, kwadingeka ithuba Vyahirev impesheni musa imbuya. Nokho, umagazini i-Forbes Russia uhlu ocebile futhi kwesokunxele ngo-2004. Manje ubonakele izindlu eduze eMoscow - ngamashumi ayisihlanu amahektha ezweni, lapho ungakwazi ukubuka izingwejeje kanye nezinyamazane, inhlanzi. Nokho, esigxotsheni kwaba "Gazprom" ayizigidi ezingu-nantathu zamadola. Angazi yindlala e-ukuphila kwakhe konke: a idividendi ngonyaka kuletha a ruble eziyisigidi nesigamu amabili nantathu. Plus impesheni kusukela wombuso.
Ngo-February 2013, washona eneminyaka dacha wakhe - inhliziyo ngokufingqiwe. Amalungu amaningi uhulumeni waya enkonzweni yesikhumbuzo, ngisho UNdunankulu Dmitry Medvedev. Bangcwaba "negesi King" nomkakhe Vostryakovsky emathuneni. ezimbalwa kakhulu abantu abathakazelayo, ukuthi waba "tehnarom": PhD mqondo ngo-1981, futhi unjiniyela academician, ilunga eliphelele Academy of Sciences, uprofesa zokuhlonipha eNyuvesi, futhi isakhamuzi zokuhlonipha kwedolobha Barnaul (lapha abantu abambalwa ukwazi eminyakeni eyishumi, kanye yiziphi izinsizakalo, kodwa kusobala, uquketheni babe, ngoba idolobha fair). Ngaphezu kwalokho, "negesi King" ngisho nangaphambi kwathatha 'uyisihlalo sobukhosi ", waklonyeliswa oda amaningi izindondo ngoba ngomsebenzi wawo wokuzidela.
Izingane kanye nezinye izihlobo
Washiya izingane ezimbili nabazukulu ezine Vyahirev iNsalela Ivanovich. Biography ubuzwe kungekho ndawo ebonisa, kodwa eziningi a baxgeki yenu, namacebo enu ukholelwa ukuthi "lesihlanu" ngokucacile "ukuthi" ngokubeka "igesi yinkosi" belingana amaJuda Chubais futhi Nemtsov. Ukwahlulela indlela abasiphikisayo enobuhlobo ne yokugcina - akunakwenzeka, naphezu kweqiniso lokuthi i-career kwi Vyahirev futhi savela lolungenamaphutsa. Kodwa kwakukhona umsebenzi! Futhi ngaleso sikhathi, elifanayo baxgeki yenu, namacebo enu kanye nombhalo efanayo ngisho Mahmudova Iskandera Kahramonovicha umJuda okuthiwa. Ukwahlulela ngokubukeka amagama kanye nezibongo - konke Vyahirev Russian.
Indodana kaRemaliya Ivanovich Yuri - a owayengumqondisi "Gazexport". Indodakazi - Tatiana Dedikova - shareholder Gazprom sika, has angaba mathathu amasheya. Umyeni wakhe - Eugene Dedikov - wahlanganyela nokuvikelwa kwemvelo emkhandlwini zesayensi kanye lobuchwepheshe JSC "Gazprom", yiphini lenhloko amandla futhi imvelo. UMfoweth 'iNsalela Ivanovich - Victor - "Tyumenburgaz" wayeyinhloko inkampani kuze 2003.
Ekugcineni kufanele kuphawulwe ukuthi "negesi King" bekulokhu kuyinselele amacebo "bezinguquko abasha" ka Nemtsov futhi Chubais mayelana kabusha umkhakha igesi wezwe. Privatisation kwenziwa ukuze wenze lokhu, ngokuvumelana Vyahirev, "bayizitha zabantu" ngokoqobo ubilise: Amasheya "Gazprom" ingxenye enkulu awungacelanga wokusakaza mahhala, futhi banikwa ekusebenzeni inkampani phansi - okungukuthi, eSiberia, ngo-North, ngqo ku imisebenzi yezimayini. Ukuze ukukhishwa kwengalo "Gazprom" ke kwakuhambisana nezinga eliphansi usongo ukulondeka kwezomnotho yezwe, lapho azikhandla ngayo futhi bezama ukuvimba iNsalela Vyahirev.
Bhalisa inkontileka sokuthengisa - imfuneko of semthethweni izindlu nezindawo ukuthengiselana
Yini imibhalo kudingeka ukuthola inombolo ye-VAT umuntfu lophilako?
Isilinganiso amalungelo abantu kanye namanye amagatsha komthetho: incazelo, izibonelo kanye umsebenzi
MRI isikhala esiswini retroperitoneal: ukubuyekezwa. MRI esiswini: kuleyo ngxenye?
Yini Ungadla kuthebula iholide ingalungiswa ekubalekeni
Uyini ukucabanga? Incazelo. Kanjani ukuthuthukisa ukucabanga: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Keyt Bekinseyl (Kate Beckinsale): Umlando kanye Filmography ka actress